राष्ट्रपतिसँग प्रचण्डको भेट, के के भयो आज बिहानको कुराकानीमा ? - Everest Dainik - News from Nepal
राष्ट्रपतिसँग प्रचण्डको भेट, के के भयो आज बिहानको कुराकानीमा ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिंगापुर गएको बेला राष्ट्रिय परिस्थिति लगायतका बारेमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रपति निवास शित्तल निवासमा आज बिहान दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो ।
भेटमा समसामायिक राजनीतिक घटनाक्रम, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिगापुरको फ्लोअप उपचार भ्रमण लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताईएको छ ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा प्रचण्डसँग जिज्ञासा राखेकी प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले फ्लोअप उपचारका लागि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य भ्रमण भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई जानकारी गराएका विषयको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको उपचारको क्रममा प्लाजÞ्मा फेरेसिस प्रक्रियाबाट गत शुक्रबारबाट नेसनल युनिभर्सिटी अस्पताल सिंगापुरमा शुरू गरिएको र त्यो प्रक्रिया अझै केही पटक गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको विषयमा अध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुभएको छ, ’ प्रचण्डले राष्टपतिलाई प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी दिदै भनेको स्रोतले बतायो ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि प्रधनमन्त्रीको स्वास्थ्य उपचार प्लाजामा फेरेसिस प्रक्रियाबाट शुरु गरिएको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीका नीजि चिकित्सक डा दिव्यासिंह शाहलाई उद्धृत गर्दै यो उपचार प्रकृया अरू केही पटक गरिने र स्वास्थ्य स्थिति अहिले सामान्य अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।